Salary မပြော ငါ့မှာမော.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Salary မပြော ငါ့မှာမော..
Salary မပြော ငါ့မှာမော..
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 15, 2013 in Community & Society, Jobs & Careers | 10 comments
တလောဂ ကျနော့်ပို့စ်မှာ ဆွိသာမီးလေးဂ Human Resources နဲ့ဆိုင်ဒါ တင်ပါဆိုလို့ အလုပ်လျောက်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်ဘာသာပြန် ဝေငှပါဒယ်..။ သာမီးလေးဆွိ အလုပ်ကွန်ပြူတာ ရှေ့ထိုင်ပြီး ဘဲပေါင်းစွပ်ပြုတ် အကြောင်းရေးဖို့ စဉ်းစားနေမည့်အစား အဂုလို အဖိုးအနဂ္ဂထိုက်တဲ့ စာကောင်းပေမွန် ဖတ်ရှုမှတ်သားဂျင်းဖြင့် ဘွလမ်းခရီးမှာ အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ခူးနိုင်ဗာစေလို့… ဆုမွန်ဂေါင်းတောင်းလျက်… မွေးစားဖေကြောင်ကြီး။
အလုပ်လျောက်သူ စိတ်အပျက်ရဆုံးထဲက တခုပြမှာ လစာမဖော်ပြဘဲ ကြော်ငြာသည့် အလုပ်ရှင်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့က အလုပ်လျောက်သူများ မျှော်မှန်းသည့် လစာကို ဖော်ပြရန် လိုလားကြပြီး အချို့ဆိုလျင် အွန်လိုင်းမှ လျောက်လွှာ မတင်စဉ်ပင် ပြောခိုင်းသည်။ အဲလိုလုပ်တာ အလုပ်လျောက်သူကို နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုရာရောက်ပြီး အလုပ်လျောက်သူ အများစုမှာ နည်းသွားလျင်လည်း လစာနည်း၊ များသွားပြန်လဲ လျောက်လွှာအပယ်ခံရမည့် အရေး ပူပန်ဖြစ်ရသည်။ အလုပ်ရှင် အများစုမှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ အလုပ်အတွက် လစာစကေး သတ်မှတ်ချက် ရှိထားတယ်ဆိုရင် လျောက်ရတာ စိတ်ပျက်စရာပဲ။ သူတို့က တမင် မပြောဘဲ ထားတာ။
ဘာပြုလို့ အလုပ်ရှင်တွေ ဘယ်လောက် ပေးမယ်ဆိုတာ လျှို့ဝှက်ထားတာလဲ။ အလုပ်ကြော်ငြာ မျက်နှာစာမှာ လစာစကေး မဖော်ပြတာ ဘာအတွက်လဲ..။
လစာကို ညှစ်ချင်တဲ့ အလုပ်ရှင်က ပြောလိမ့်မယ်.. လစာစကေး ထုတ်ပြောရင် အလုပ်လျောက်သူအားလုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိပ်ဆုံးစကေးမှာထား တောင်းကြမှာပဲ.. သူတို့ အရည်အချင်း အဆင့်ကြောင့် လစာလျော့နည်း ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ စိတ်ပျက်၊ ဒေါဖောင်းကုန်ကြမယ်။ ဥပမာ ဒေါ်လာ ငါးသောင်း၊ ခြောက်သောင်း ပေးမယ်လို့ အလုပ်ကြော်ငြာတဲ့အခါ အလုပ်ရှင်များ အကြောက်ဆုံးက ခြောက်သောင်းတော့ အောက်ထစ် တောင်းမှပဲလို့ လူတိုင်း တွေးကုန်မှာကိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ကမ်းလှမ်းတော့ အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်ပြီး ဒေါ်လာ ၅၂၀၀၀ ပဲ ပေးတဲ့အခါ အလုပ်လျောက်သူက ငါတော့ အညှစ်ခံရပြီ တွေးမယ်။ အလုပ်ရှင်က ၆၀၀၀၀အထိ တတ်နိုင်တယ် သိထားတာကိုး။ ဘယ်လောက်ဆိုတာ လျောက်တဲ့သူ မကြားထားရင် ပေးတဲ့လစာကို ကျေနပ်နေအုံးမယ်။
ဒီခေတ်မှာ အလုပ်ရှင်ကောင်းဆို လစာစကေး ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတယ်၊ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ပဲ ပေးတယ် ရှင်းပြလိမ့်မယ်။ မပြောတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကတော့ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် အများစု ကျေနပ်မှာ မဟုတ်ထင်တဲ့ အဆိုးမြင်သမား များတယ်။
အလုပ်ရှင်တွေ စိုးရိမ်တာ အဲဒါတင် မကဘူး။ တကယ် အသုံးကျမည့်လူအတွက် ပိုပေးချင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ လစာ ၅၀၀၀၀ – ၆၀၀၀၀ အကြား သတ်မှတ်ရင် ၇၀၀၀၀ အောက်မစဉ်းစားသူ လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ လူတော်က အလုပ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျရင် အလုပ်ရှင်ဖက်က သူတောင်းတဲ့ လစာပေးဖို့ လိုလိုလားလား ရှိမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူအများစုအတွက် မဟုတ်လေတော့ ကြော်ငြာထဲ ထည့်မရေးချင်ဘူး။ အဆုံးမတော့ လစာစကေး လုံးဝ မထည့်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့။
ဒါဆို အလုပ်အတွက် လစာ မပြောတဲ့ အလုပ်ရှင် များလာတဲ့အခါ အလုပ်လျောက်သူတွေ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ..၊ ဘယ်အချိန်မျိုးမှာ လစာသည် အဓိက စဉ်းစားရမည့် အချက်ဖြစ်မလဲ..။ တချက်သိထားရမှာ ကိုယ်လျောက်တဲ့ အလားတူ အလုပ်မှာ ပုံမှန် ဘယ်လောက်ပေးသလဲ။ ဝန်ထမ်းရှာဖွေရေးသမား၊ ကိုယ့်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်က ကုမ္မဏီလုပ်ငန်း၊ ကိုယ့်အလုပ်ထဲက လူတွေမေးမြန်းတာနဲ့တင် လိုချင်တဲ့ အချက်အလက် ရနိုင်ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ၊ နယ်မြေအနေအထား စတာတွေ ကိုက်ညှိလိုက်တဲ့အခါ ထိုက်တန်တဲ့ လစာတောင်းဖို့ စိတ်ပိုရဲလာပါမယ်၊ လျော့နည်း ပိုဝေး အစွန်းနှစ်ဖက် ရောက်မှာ ပူနေစရာ မလိုတော့ဘူး။
ဒုတိယ အနေနဲ့ တချိန်ချိန်မှာ အလုပ်ရှင်က သူတို့သတ်မှတ် လစာထုတ် မပြောဘဲ ဘယ်လောက် လိုချင်သလဲ မေးတယ် ဆိုကြပါစို့။ အလုပ်ရှင်က လစာပမာဏ အရင်ပြောလိမ့်မယ်လို့ အလုပ်လျောက်သူ အတော်များများ ယူဆထားပြီး ပြောလာတဲ့အပေါ် တုံ့ပြန် အဖြေပေးကြတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း အဲသလို မဖြစ်တာ မကြာခဏမို့ ကြိုကြိုတင်တင် ပြင်ဆင်ထားရင် ကို့ယို့ကားယား ဘာဖြေရမှန်းမသိ အဖြစ်နည်းပြီး ထိုက်သင့် လစာတောင်းဖို့ အဆင်သင့် ပိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
By Alison Green | U.S.News & World Report LP – Mon, Sep 30, 2013
It’s one of the biggest frustrations of job-seekers: employers who advertiseajob but refuse to say what it pays.
Adding to the frustration, many of them expect job-seekers to name the salary they’re looking for – some even requiring it before an application can be submitted online. This, of course, puts applicants in an incredibly unfair position, and makes most of them worry that they’ll lowball themselves or ask for so much that they’ll be removed from the running. It’s particularly infuriating when you consider that most employers haveasalary range budgeted for the position. They just won’t disclose it.
So why do employers make suchasecret out of what they’re willing to pay? What not just listasalary range up-front in the job ad?
Employers who play coy on salary will tell you that it’s because if they listasalary range, all candidates will assume they should be at the top of the range … and will then get upset or be disappointed if their offer comes in lower because of the level of their qualifications. In other words, if an employer advertises thatajob pays $50,000 to $60,000, they fear that every applicant will think, “Great, low 60s. That works for me.” But if an applicant ends up getting an offer for $52,000 because that’s where his or her experience places him or her, he or she will feel that he or she is being lowballed because, after all, he or she knows the employer is willing to pay up to $60,000. The applicant may have been happy with that offer if he or she had never heard about the full range available.
Now,agood employer will be able to explain how the scale works and why the candidate fits into it where he or she does. But employers who don’t want to disclose their full range believe that too many people still won’t be satisfied, and that they’ll be creating dissatisfaction that otherwise wouldn’t exist.
And that’s not all employers worry about. Sometimes they don’t want to listarange in their ads because they’d be willing to pay more for the right candidate – but not for most. For instance, if they listasalary range of $50,000 to $60,000, the candidate who won’t consider anything below $70,000 might never apply. And if that person is good enough, the employer might be willing to meet those salary demands. But since they wouldn’t pay it to most candidates, they don’t want to put it in the ad. Asaresult, they conclude it’s better not to listarange at all.
So what can candidates do in the face of so many employers who won’t reveal the salary forajob, when salary happens to beamajor consideration for most job-seekers? One key is to know what jobs like the ones you’re applying for typically pay. You can often getasolid sense by talking with recruiters, checking with professional organizations in your industry and even just bouncing figures off of other people in your field. Once you come up witharange for your experience level and in your geographic area, you can feel more confident namingasalary figure first, without the worry that you’ll be wildly off in either direction.
And second, assume that at some point the employer is likely to ask you about what salary you’re looking for, without telling you their own range first. Too often, job-seekers assume that the employer will nameafigure first and they can then respond to it – but by knowing that often isn’t the case, you’ll be better prepared, less likely to be caught off-guard, and more equipped to negotiateafair salary for yourself.
ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ် သိပြီး
သတ္တိ ရှိရှိ တောင်းရဲဖို့ လိုတာပေါ့နော်…
၀န်ထမ်းတွေကလဲ အခက်သားကလား…အတွေ့အကြုံလဲမရှိ…အသက်ကလဲငယ်..ပညာလဲမစုံ …လစာကတော့နင်းကန်ခွတောင်ကြတာကလား …
Wow ပြောတာထောက်ခံပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်ရတဲ့သူတွေအတွက်လဲ ကိုယ်လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်ချိန်လို့ရသလို အလုပ်ရှင်တွေလဲ အရည်အချင်းမပြည့်မှီတဲ့သူတွေကို အင်တာမဗျူးရတော့အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းရတာပေ့ါ။
လစာကို ဖော်ပြ ခေါ်ပြန်ရင်လည်း လိုချင်တဲ့လူ လာမလာ မသေချာ
မဖော်ပြပြန်တော့ လိုချင်တဲ့သူ ပါရင်တောင် လစာက တစ်မျိုး
လစာနဲ့ လုပ်အားနဲ့ မျှတရင်တော့ ကောင်းသပေါ့
တစ်ဖက်ဖက်ကတော့ မျှတအောင် လုပ်သင့်တယ်ထင့်
အခြေခံလစာတောင် မသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့အဖြစ် ဆိုတော့
တခါတလေကျတော့လည်း အလုပ်ခေါ်စာမှာ (ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်သက်၊ အသက်အရွယ်၊ လစာ စသဖြင့်) ကန့်သတ်ချက်တွေများရင် အလုပ်လျှောက်မယ့်သူကို တွေဝေစေနိုင်တယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်း ပညာအရည်အချင်းကို သဘောကျရင် အခြားကန့်သတ်ချက်တွေကို လျော့ပေ့ါနိုင်တာမို့ …..
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအရ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ အလုပ်ရှင်ဘက်က ကန့်သတ်ချက်အားလုံးနဲ့ မကိုက်ညီသည့်တိုင်အောင် အလုပ်လျှောက်သူအနေနဲ့ လျှောက်ထားကြည့်သင့်တယ်။
သာမီးဂတော့ မပြောထားတာပိုကြိုက်တယ် ကြောင်။
မားကက်မှာ ဒီ အလုပ် လုပ်နိုင်သူဟာ ဒီ Range ရနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီ နယ်ပယ်မှာ လယ်ဝယ်သူတိုင်းသိနိုင်တာမို့။
အလုပ်လျှောက်တဲ့သူက ကြိုက်ဈေး(ကိုယ်နဲ့ တန်တဲ့ဈေး) “Salary” တောင်းးးးးး သင့်တယ်ထင်တယ်။
နဂိုရှေးရေးဘယ် က မျှတသလားလို့။
မဟုတ်လို့ လစာပါ အရင်ဖော်ပြရင်တော့ ဘာတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာပါ ဖော်ပြသင့်တယ်။
အဲလာ အိတ်(ချ) အာ ဝီဇာတ် တွေ အလုပ်။
သများဟာသများ ဘဲ နဲ့ ပေါင်းးး (အဲလေ) ဘဲပေါင်းနေတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
သများနာမည်ပါလို့ လာကြည့်မိတာ။ ဟွန့်
ဒါကတော့ အလုပ်လျှောက်မယ့်မြေးလေးတွေအတွက် ဘဘကြောင်ရဲ့ထွမ်စလေးရှင်းပေါ့
မျှော်မှန်းလစာရေးရတာ အတော်လေးတော့ ခက်သား… ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်သိပြီး ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်သလောက်ပဲ တောင်းမိတာပါပဲ… ဒါမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အလုပ်သစ်တစ်ခုမှာ အစကသင်ယူရမယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လျင်လျင်မြန်မြန်သင်ယူပြီး တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့ ခံစားမိရင်တော့ CV ထဲ အကုန်ထည့်ရေးပြီး တောင်းလိုက်တယ်.. မပေးရင် မလုပ်ဝူး..